३ जेठमा बजेट अधिवेशन आह्वान Arthabyapar.com || Point Media Pvt. Ltd.
आगामी बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्न सक्ने,आयकरको सिमा पनि बढाइने
२६ बैशाख/अर्थ र व्यापार – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी ३ जेठमा संघीय संसद्‍को बजेट अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसमा आगामी ३ जेठकालागि राष्ट्रपति भण्डारीले बजेट अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।
सरकारले आगामी ३ जेठमा बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ जेठमा बजेट अधिवेशन बोलाउन निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार नै सरकारले आगामी ३ जेठको दिउँसो ४ बजे बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको हो ।
वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको १५ जेठमा नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाकै कारण सरकारले नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने कम्तीमा १५ दिनअघि नै संसद्को दुबै सदनमा प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बाध्यात्मक अवस्थाकाबीच गत वर्षको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । त्यो बजेटलाई वर्तमान सरकारले अस्विकार गरि पुनः प्रतिस्थापन विद्येयक मार्फन चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको थियो ।
संघीय संसद सचिवालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम आगामी ७ जेठमा संसदमा पेश गर्ने गरी प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले संसदको दुवै सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरुको रुपरेखाबारे छलछल गर्नेगरी गत २० बैशाखमा प्रस्ताव तयार गरेको थियो । तर बजेट अधिवेशन सुरु नहुँदा अर्थ मन्त्रालयले अझै संसदमा पेश गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयले अनुमान गरेको समयमा छलफल नभएपछि आगामी ३ जेठमा मात्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरूमा छलफल गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले संघीय संसदमा आगामी ३ जेठदेखि प्रि–बजेट छलफल बोलाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । संघीय संसद सचिवालयलका अनुसार आगामी ३ जेठमा अर्थमन्त्रीले बजेटको प्राथमिकता पेश गर्ने, ४ जेठमा प्रि–बजेट छलफल गर्ने, प्रि–बजेटमाथिको छलफल र मन्त्रीबाट जवाफ प्रस्तुत गर्न दिने र आगामी ७ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपति समक्ष आगामी ३ जेठमा बजेट अधिवेशन बोलाउने मिति सिफारिस गर्ने निणर्य गरेको हो । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसैले आगामी १५ जेठमा सार्वजनिक हुने बजेट ल्याउने दिन नजिकिँदै गर्दा ढिलो गरि प्रि बजेट छलफल सुरु हुन लागेको हो ।कोभिडको महामारीबाट थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वषको बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देशको सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि जल, जमिन, जंगल, खानी, कृषि, पर्यटन लगायत प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, निर्यात प्रवद्र्धन व्यवस्थापन एवं प्रतिस्थापन, गुणस्तरीय पर्यटन सेवा विस्तार र विद्युत् ऊर्जाको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाइरहेको छ ।
राष्ट्रि योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौँ योजनाले परिकल्पना गरेका विकासका परियोजना, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अघि सारिएका विकास–निर्माणका परियोजना तथा कार्यक्रमको निरन्तरता, संसदीय समितिबाट भएका निर्देशन र सरकारले गरेका प्रतिबद्धता, राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखबाट समय–समयमा व्यक्त भएका विचार र मार्ग निर्देशनलाई आधार बनाएर बजेट तर्जुमा भइरहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी बजेटको सिलिङ झन्डै साढे १७ खर्बको हुने छद । मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९ अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० कालागि सार्वजनिक हुने बजेटको सीमा १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ दिएको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको बजेट मस्यौदा लेखन समितिले यही सिलिङलाई आधार बनाएर बजेट लेखन गर्नेछन् ।
अर्थ मन्त्रायलले गत २ चैतमा मन्त्रालय अन्तरगतकै राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी तोकिएका छन् ।
अर्थले तोकेको यस्तो कोर बजेट लेखन समितिले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्नेछ । बजेट वक्तव्यको मस्यौदा समेत यही समितिबाट तयार हुनेछ । अर्थलाई बजेट लेखनको प्रक्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राजस्व परामर्श विकास समितिले तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार सहयोग गर्ने गर्छन् । त्यसैले आगामी नयाँ बजेट निर्माणमा पनि यही संयन्त्र अनुसार नै काम भईरहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले अर्थ मन्त्रालयले सिलिङको आधारमा बजेटको तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ दिएको छ । यसैको आधारमा अहिले छलफल भइरहेका मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी नयाँ बजेटमा सरकारी कर्मचारीहरुको तलब दुई हजार रुपैयाँले बढ्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट कर्मचारीहरुको तलब बढाउने तयारी गरेको छ ।
चालु आवको बजेट सार्वजनिक गर्दा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीको तलब नबढाएर भत्ता सोलोडोलो दुई हजारले बढाएका थिए । यसपालि भने तलब नै दुई हजार रुपैयाँले बढ्ने भएको हो। भत्ताको भार सरकारलाई तत्कालका लागि मात्रै परे पनि कर्मचारीको मासिक तलब वृद्धिको असर भने दीर्घकालसम्म पर्नेछ । बढेको तलबले अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि सरकारको सामाजिक सुरक्षा खर्च (निवृत्तिभरण) व्यवस्थापनमा पनि चाप पर्ने छ।
दुई वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट मा पनि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको दोस्रो बजेटबाट सरकारले नायब सुब्बासम्मका कर्मचारीका लागि २० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको पदका लागि १८ प्रतिशतले तलब बढाएको थियो ।
सो बजेट मार्फत बढेको तलब निजामतीका साथै प्रहरी, सेना, शिक्षक र प्राध्यापकहरुका लागि पनि लागू हुनेछ । कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा प्रत्येक २÷२ वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने परिपाटी रहे पनि कोभिड महामारिको असरले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा दुई हजार भत्ता मात्रै वृद्धि गरिएको थियो । योपटक भने सरकारले दुई हजार भत्तालाई निरन्तरता दिँदै कर्मचारीको तलब दुई हजार रुपैयाँसम्म बढाउने तयारी गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । बढ्दो महँगीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तलब वृद्धि गर्न लागेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको हो ।
आगामी नयाँ बजेट मार्फत सरकारले कर्मचारीको तलबसँगै आयकरको सीमामा पनि परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आयकरको सीमा बढाएका थिए । जसमा व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पत्तिको हकमा ४ लाख ५० हजारसम्मको वार्षिक आयमा आयकर छुट हुँदै आएको छ । यो सिमा सम्मको आयमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर मात्र लाग्छ।
व्यक्तिगत र दम्पत्ति दुवैलाई सो सिमा पछिको थप एक/एक लाखमा १० प्रतिशत आयकर लाग्छ । सो सिमा पछिको थप दुई/दुई लाखसम्ममा २० प्रतिशत कर लाग्छ । यसमाथि व्यक्तिलाई ७ देखि २० लाखसम्मको आयमा र दम्पत्तिलाई साढे ७ लाखदेखि २० लाखसम्मको आयमा ३० प्रतिशत लाग्छ भने यसमाथिको आयमा ३६ प्रतशत कर लाग्दै आएको छ।
यो सीमा पुनरावलोकन नभएको पनि ३ वर्ष पुगेको छ । एक व्यक्ति र परिवारको आधारभूत आवश्यकता कम्तिमा दुईवटा सन्तानसम्मको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायत खर्च धान्न हालको सीमाले नपुग्ने सम्बन्धीत क्षेत्रका विज्ञ तथा अर्थविद्हरुले विश्लेषण गरेका छन । सोही कारण उनीहरुले आयकरको छुटको सीमा वर्तमानको मूल्यवृद्धि समेतलाई आत्मसात गरी समयसापेक्ष वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्। यस्तो सुझावमा अर्थमन्त्री तथा बजेट लेखन समिति सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।